Home Wararka Ma la heli doonaa dad u istaaga caddaalad u helida Xildhibaan Aamina...
Ma la heli doonaa dad u istaaga caddaalad u helida Xildhibaan Aamina Maxamed?
Xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi waxaa ay ka tirsaneyd shantii sanno ee la soo dhaafay Mudaneyaasha Golaha Shacabka, waxaana habeenamadii Arbacada iyada iyo tobbonaan kale lagu dilay Qaraxyo Is-xig-xigay oo ka dhacay Magaalada Beledwayne.
Haddaba ma laga yaabaa in la helo dad u istaaga caddaalad u helida Xildhibaan Aamina Maxamed oo la dilay iyadoo cadaalad raadineysa?
Halka Hoose ka dhageyso Warbixin ay diyaarisay Risaala
Previous articleCabdiwali Gaas oo magaaladda Doha shirar qarsoodi ah kula galay sirdoonka Qatar? Maxaa is badalay?
Next articleMaxaa fashiliyay kulankii xalay ee taageerida Saciid Deni? Muxuuse isagu uga baaqday?
Haddii uu Ducaale Islow is casilo Maxay soo kordhineysaa?
Taliyihii Ciidanka Madaxtooyada Puntland oo dagaal ku dhintay